INSTAGRAM က ဓာတ်ပုံတွေကို SKYDRIVE မှာ အလိုအလျှောက် BACK UP လုပ်ကြမယ် ~ The ICT.com.mm Blog
INSTAGRAM က ဓာတ်ပုံတွေကို SKYDRIVE မှာ အလိုအလျှောက် BACK UP လုပ်ကြမယ်
ANDROID ဖုန်း ၊ iPhone နှင့် WINDOWS ဖုန်း တွေက ဓာတ်ပုံတွေ ကို BACK UP လုပ်ဖို့ သင့်ရဲ့ PC ကို အသုံးပြုဖို့မလိုတော့ပါဘူး ။ DROPBOX ၊ SKYDRIVE စတဲ့ ၀န်ဆောင်မူတွေကနေတစ်ဆင့် သင့်ဖုန်းက ဓာတ်ပုံတွေကို အလိုအလျှောက် BACK UP ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ ။
အခုကတော့ INSTAGRAM က ဓာတ်ပုံတွေကို SKYDRIVE မှာ IFTTT RECIPE သုံးပြီး ဘယ်လို BACK UP လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
RECIPE တစ်ခုကို အောက်ပါ အဆင့် အတိုင်းလိုက်လုပ်ပြီး ဖန်တီး ကြည့်ရအောင်
1. ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ IFTTT WEB SITE ကိုသွားပြီး FREE ACCOUNT တစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ ရှိပြီးသားဆိုရင်လည်း DASHBOARD က CREAT RECIPE ဆိုတာကို နှိပ်ပါ ။
2. “ this” ဆိုတဲ့ အပြာရောင် LINK ကို နှိပ်ပါ ။ ပြီးတာနဲ့ INSTAGRAM ကို သင့်ရဲ့ TRIGGER CHANNEL အဖြစ်ရွေးပေးပါ ။ သင့်ရဲ့ INSTAGRAM ACCOUNT ကို ၀င်ဖို့ PERMISSION ပေးရပါလိမ့်မယ်။
3. “ANY NEW PHOTO BY YOU” ဆိုတာကို နှိပ်ပေးပါ ။ ပြီးရင် CREAT BUTTON ကို နှိပ်ပေးပါ ။
4. “that” အပြာရောင် ဆိုတဲ့ LINK ကိုနှိပ်ပေးပါ ။ ပြီးရင် BROWER TAB မှာ SKYDRIVE CHANNEL ကိုကြည့်ဖို့ “VIEW ALL CHANNELS” ကိုနှိပ်ပေးပါ ။
5. SKYDRIVE CHANNEL ကို ACTIVATE လုပ်ပါ ။ သင်ရဲ့ SKYDRIVE ACCOUNT ကိုလည်း IFTTT အတွက် ACCESS လုပ်ပေးပါ ။
6. SKYDRIVE ACCOUNT ကို ACTIVATE လုပ်ပြီးတာနဲ့ TAB ကို ပိတ်လိုက်ပါ ။ SKYDRIVE ကို သင့်ရဲ့ ACTION CHANNEL အဖြစ် ရွေးချယ် ပြီးတော့ RECIPE ကို CONTINUE လုပ်ပါ ။
7. “ADD FILE FROM URL” ကို ရွေးချယ်ပေးပြီးတော့ အပြာရောင် CREAT ACTION BUTTON ကိုနှိပ်ပါ ။
8. နောက်ဆုံး အဆင့်ကတော့ CREAT RECIPE BUTTON ကို နှိပ်ပေးပြီးတော့ သင့်ရဲ့ NEW RECIPE ကို SAVE လုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ ။
အခုဆိုရင် သင့် ရဲ့ INSTAGRAM ACCOUNT မှာ ဓာတ်ပုံအသစ်တွေ ကို ၁၅ မိနစ်တစ်ခါ CHECK လုပ်ပေးပြီးတော့ သင့်ရဲ့ SKYDRIVE ACCOUNT မှာ SAVE လုပ်ပေးမဲ့ RECIPE တစ်ခုကို ရရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုမှတ်ထားရမှာကတော့ သင့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံ အဟောင်းတွေအတွက် အဲ့ဒီ့ RECIPE က အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ။ ဓာတ်ပုံအသစ်တွေ အတွက်သာ အလုပ်လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
သင် ကိုယ်တိုင် RECIPE တစ်ခု ကို ဖန်တီး အသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ IFTTT’s SITE မှာ တစ်ခြား USERS တွေ CREAT လုပ်ထားတဲ့ RECIPE ကို SHARE လုပ်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ် ။
Newer PR from MCPA Office: MCPA Exam Preparation သင်တန်း နှင့် Exam သတင်း
Older 1st Mobile & Tablet Fair တပ်မတော်ခန်းမ သတင်းပေးပို့ခြင်း
Instagramမှ Private Photosများ အမှန်တကယ် လုံခြုံခြင်းမရှိ
အကောင့်ကို Privateလုပ်ထားတဲ့ Instagramအသုံးပြုသူများရဲ့ ဓါတ်ပုံများဟာ လုံခြုံခြင်းမရှိဘဲ Publicအနေနဲ့ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပ...
Instagramရဲ့ လက်ရှိ ပေါက်ဈေးဟာ Facebook၀ယ်ခဲ့တဲ့ ဈေးနှုန်းထက် ၄၉ ဆ ဖြစ်လာ
Facebookအကြီးအကဲ Mark Zuckerbergက ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ Instagramကို ဒေါ်လာ တစ်ဘီလီယမ်နဲ့ ၀ယ်ယူဖို့ သဘောတူခဲ့တုန်းက အများအပြားက ကန့်ကွက်...
Instagramမှာ လစဉ်အသုံးပြုသူ သန်း၁၅၀ ရှိပြီ
ကမ္ဘာကျော် လူမှုကွန်ရက်တစ်ခု ဖြစ်သည့် Instagramအနေဖြင့် လစဉ်ပုံမှန်အသုံးပြုသူ သန်း၁၅၀ခန့် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်...
Instagram For Android 4.1
အခုအချိန်မှာ လူသုံးများနေတဲ့ Instagram Appရဲ့ ဗားရှင်းအသစ်ကို မြန်မာအိုင်စီတီ ပရိသတ်တွေ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အန်းဒရွ...